Noho ilay horohorotany, maro ny trano nitritra… : mbola mihorohoro ny mponina any Betafo sy Antsirabe | NewsMada
Noho ilay horohorotany, maro ny trano nitritra… : mbola mihorohoro ny mponina any Betafo sy Antsirabe
Voalaza fa anisan’ny mafy indrindra tamin’ny horohorotany niseho teto amintsika, tao anatin’ny 28 taona ilay horohorotany niseho, omaly maraina be iny. Tany akaikin’ny foibeny, maro ireo trano nitritra… Mbola raiki-tahotra sy mihorohoro ny ankamaroan’ny mponina any Betafo sy Antsirabe.
Nitritra ny trano, vaky ny fitaratra, nianjera ny trano narefo… Ampahany tamin’ny fahavoazana nateraky ny horohorontany niseho ny maraimben’ny alakamisy teo ireo. Nihetsika mafy ny tany tamin’ny alakamisy tamin’ny 1 ora sy 6 minitra sy 29 segondra. Naharitra 1080 segondra ny faharetan’izany fihetsehan’ny tany izany saingy ny 55 segondra ihany no tena henon’ny olona. Anisan’ny tena nahitana trano nitritra betsaka ny tany Betafo sy Antsirabe iny izay, toerana nanakaiky ny foiben’ny fihetsehan’ny tany.
Nanaitra tampoka tamin’ny torimaso ity horohorontany ity. Nikoropaka nivoaka tany an-tokontany ny mponina tany Betafo ary ny sasany aza niantso vonjy eraky ny tanàna mihitsy, tsy hita izay hosarangotina noho ny tahotra sy ny hatairana.
Raha ny filazan’ny etsy amin’ny Yoga Ambohidempona, araka ny resaka nataon’ny profesora Rambolamanana Gerard, anisan’ny horohorontany mafy indrindra teto Madagasikara iny nanaitra ny vahoaka manerana ny Nosy iny.
Nahatratra 5,9 amin’ny mari-pandrefesana Richter ny herin’izany horohorontany izany. Nahenoana ny fihovitrovitry ny tany avokoa manerana ny Nosy saingy tao amin’ny kaominina Ampamoizankova kosa no tena nisy ny foibeny.
Nivava ny tany ao amin’ity kaominina ity ka izay no nampihetsika mafy ny tany. Efa nisy fivakisana io toerana io tany amin’ny 21 avrily 1991 ary izao niverina nihetsika izao indray.
Raha ny fanazavana, hahatratra 7 Richter ny horohorontany hiseho amin’ity taona ity. Tsy fantatra mialoha anefa ny hitrangan’izany.
Anisan’ny mahatonga ny horohorontany ny fivakisan’ny tany sy ny fipoahan’ny volkano. Horohorontany tokana iny niseho iny saingy miseho anatin’ny onja intelo miantona izany ka izay no mbola nahenoana fihetsehan’ny tany tany Antsirabe omaly, tamin’ny 7 ora maraina, raha ny fanazavan’ny profesora Rambolamanana Gerard, hatrany.
Matahotra ny olona any Betafo sy Antsirabe
Hatry ny omaly, nihorohoro ny mponina tany Betafo sy Antsirabe. Tany Betafo, nahatsikaritra ny mponina fa tsy toy ny isan’andro ny hafanan’ny rano tao ranomafana. Nihamamay izany raha ny filazan’ireo mponina any an-toerana.
Omaly maraina ihany, noravaina ny mpianatra tao amin’ny CEG Annexe, Ambohimiadana Ambositra satria nitritra ny efitranon-tsekoly ka atahorana hitera-doza amin’ny mpianatra.
Mampisahotaka ihany koa ny feo fa mbola mety hiverina iny horohorontany iny. Tao ireo nitondra ny zanany avy hatrany niakatra aty Antananarivo. Ny sasany nanamafy ny trano nitritra, ny hafa nifindra amin’ny havana manana trano mafy.